The Rohingya News Bank : OIC
Showing posts with label OIC. Show all posts
ရိုဟင်ဂျာအရေး မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို မပြတ်ဖိအားပေး သွားဖို့ OIC နိုင်ငံတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တိုက်တွန်း
ရိုဟင်ဂျာတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ သိက္ခာရှိရှိ ပြန်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ အပေါ်မပြတ်ဖိအားပေးရာမှာ ဆက်လက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ OIC အစ္စလာမစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မဆုဒ် ဘင် မိုမန်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မတ်လ ၂၂ ရက်နဲ့ ၂၃ ရက်နေ့က ပါကစ္စတန် အစ္စလာမာဘာ့ဒ်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ OIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ကောင်စီရဲ့ ၄၈ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ အခုလို တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2022, mm, OIC, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
သဘောတူထားတာကို ချိုးဖောက်မှုက အဓိကပြဿနာဟု ဂမ်ဘီယာတင်ပြ
28 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2022
ရိုဟင်ဂျာ Genocide အမှု မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စွဲဆိုခွင့် ရှိ ကြောင်း ICJ မှာ Gambia လျှောက်လဲ
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု စွဲဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှာ သောကြာ နေ့ က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တင်ပြချက်အပေါ် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက အခု သတင်းကြေညာနေတဲ့အချိန်မှာ ချေပလျှောက် လဲ သွားပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာက လျှောက်ထားရာမှာ မြန်မာတင်ပြခဲ့တာက အရင်တင်ပြခဲ့တတွေကိုပဲ တင်ပြတာကြောင့် အနည်းငယ် ပဲ တင်ပြပါမယ်လို့ အစချီပြီး ဂမ်ဘီယာကို မြန်မာက စွပ်စွဲသလို OIC ရဲ့ ခိုင်းစေချက်အရလုပ်တာမဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားတွေ တင်ပြသွားပါတယ်။
အဓိကအကြောင်းက လူမျိုးသုဉ်း လုပ်ရပ်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်မှာ သဘောတူခဲ့သလို မြန်မာ က မထိန်းသိမ်းဘဲ ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
Labels: 2022, ICJ, mm, OIC, ဂမ်ဘီယာ, မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
မြန်မာ ကန့်ကွက်ချက် လက်မခံရန် ICJ တွင် ဂမ်ဘီယာ လျှောက်ထား
ဂမ်ဘီယာရှေ့နေချုပ်က လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြုံနေရသည့် အခြေအနေများသည် တရားမျှတမှုရရှိရန် ပိုမိုဝေးကွာနေပြီဟုလည်း ထောက်ပြပြောဆိုသည်
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်များဘက်က လျှောက်ထားသည့် ကန့်ကွက်ချက်များကို လက်မခံဘဲ ပယ်ချရန် ဂမ်ဘီယာ ကိုယ် စားလှယ်အဖွဲ့က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်က လျှောက်ထားသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်သည် ဆိုသော ဂမ်ဘီယာက မြန်မာအပေါ်စွဲဆိုထားသော အမှုဆိုင်ရာ ကြားနာပွဲတွင် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ရှေ့နေ များက တရားရုံး၌ ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
Labels: 2022, ICJ, mm, OIC, ဂမ်ဘီယာ, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး
မြန်မာကန့်ကွက်မှုပယ်ချဖို့ ICJ ကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံလျှောက် ထား
23 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2022
နိုင်ငံတကာတရားရုံး (ICJ) မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်က ကန့်ကွက်ထားတာကို ပယ်ချပေးဖို့ ဒီကနေ့ကြားနာပွဲအတွင်း ဂမ်ဘီယာရှေ့နေချုပ်က ICJ မှာ တင်ပြ သွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ထောက်ပြကန့်ကွက်နေသလိုမျိုး ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကိုယ်စားမှ လုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း အခိုင်အမာ ပြောသွားပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Labels: 2022, Dawda Jallow, ICJ, mm, OIC, ဂမ်ဘီယာ, မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ
ရိုဟင်ဂျာအမှု ဂမ်ဘီယာရဲ့လျှောက်လဲချက် ဒီနေ့တင်သွင်း မည်
၂ဝ၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့က နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိတ်မြို့ ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် မြန်မာအရေး ကြားနာစစ်ဆေးစဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဂမ်ဘီ ယာ နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှာ စွဲဆိုထားတဲ့အမှု ကြားနာစစ်ဆေးမှုကို ဒုတိ ယနေ့အဖြစ် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်က လျှောက်လဲချက်တွေကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့ ICJ တရားရုံးမှာ ဒီနေ့တင်ပြမှာပါ။
ဒီအမှုကို အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ OIC ကိုယ်စား ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ် ပြီး နိုင်ငံ အနေနဲ့ပဲ အခြားတစ်နိုင်ငံကို တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိတဲ့အတွက် ICJ တရားရုံးအနေနဲ့ စစ်ဆေးစီရင်ခွင့် မရှိ ကြောင်း မြန်မာဘက်က ရှေ့နေတွေက ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က ကြားနာစစ်ဆေးမှုမှာ လျှောက်လဲ ချက် ပေးခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2022, ICJ, mm, NUG, OIC, ဂမ်ဘီယာ, ဂျုန်း ဒေါ်နိုဟျူး, သတင်း, ဦးကိုကိုလှိုင်
ရိုဟင်ဂျာအမှု စစ်ကောင်စီ နိုင်ခြေရှိသလား
၂ဝ၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့က ICJ တရားရုံး မြန်မာအရေး ကြားနာစစ်ဆေးပွဲတွင် တွေ့ရသော စစ်ကောင်စီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင်။
Photo: Ministry of Foreign Affairs Myanmar/Facebook
ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲထားတဲ့ အမှု ကို ICJ တရားရုံးမှာ တနင်္လာနေ့က စစ်ကောင်စီဘက်က စတင်ပြီး လျှောက်လဲချက် ပေးခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီ ဝန်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင်နဲ့ စစ်ကောင်စီခန့် ရှေ့နေ Cristoper Staker တို့ လျှောက်လဲခဲ့ကြတာပါ။
ဒီလျှောက်လဲချက်တွေဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခုခံချေပခဲ့တဲ့ ပုံစံအ တိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအနေနဲ့ စွဲဆိုထားတဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို တရား ရုံးက စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ စစ်ကောင်စီဘက်က ချေပခဲ့သလို IOC အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအ ဖွဲ့ ပါဝင်ခွင့်မရှိဘူးလို့လည်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2022, Cristoper Staker, ICJ, mm, NUG, OIC, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၁ရက်က နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့တွင် မြန်မာအပေါ် ဂမ်ဘီယာက တရားစွဲထား သည့်အမှုကို ပြန်လည်ချေပနေသည့် စစ်ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ / အိုင်စီဂျေ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက စွဲဆိုထားသောအမှုတွင် နောက်ကွယ်၌ အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်ဆောင် ရွက် ရေးအဖွဲ့ (OIC) က ကြိုးကိုင်နေသဖြင့် အမှုကို လက်မခံသင့်ကြောင်း အာဏာသိမ်းမြန်မာ စစ်ကောင်စီ၏ ကိုယ်စား လှယ်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICJ) တွင် ပြောကြားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်က နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်သည်ဆိုသော ဂမ်ဘီယာက မြန်မာအပေါ်စွဲဆိုထားသော အမှုဆိုင်ရာ ကြားနာပွဲတွင် မြန် မာ စစ်ကောင်စီငှားရမ်းထားသော ဗြိတိန်အခြေစိုက် ဥပဒေပညာရှင် ရှေ့နေများက ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
Labels: 2022, ICJ, mm, NUG, OIC, စစ်ကောင်စီ, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု, အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ
ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုစွဲချက်အမှု အိုင်စီဂျေ နောက်ထပ်ကြားနာမှု စတင်
၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
မြန်မာဘက်က ရှေ့နေအဖွဲ့က ကန့်ကွက်ချက်တွေကို တင်ပြလျှောက်လဲ
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး(ICJ)မှာ မြန်မာနဲ့ ဂမ်ဘီယာတို့ရဲ့ လျှောက်လဲ တင်ပြချက်တွေကို နောက်ထပ် ကြားနာမှု ဒီနေ့ စတင်နေပါတယ်။
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ဂျီနီဗာပဋိညာဉ်ကို မြန်မာဘက်က ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တ ရားစွဲတဲ့အမှုကို NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းက ကနဦးကန့်ကွက်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် အဲဒီကန့် ကွက် မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ICJ က ကြားနာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2022, Genocide, ICJ, mm, NUG, OIC, ဂမ်ဘီယာ, ဒေါ့ဒါဂျာလိုး, သတင်း, ဦးကိုကိုလှိုင်
ICJ မှာ စစ်ကောင်စီ ဖြေရှင်းခွင့်ရ၊ NUG နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေ ကန့်ကွက်
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံ က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ မှာ တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ လေးရက်ကြာ ကြားနာ စစ် ဆေးမှုတွေကို မနေ့က နယ်သာလန် နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့ ICJ တရားရုံးမှာ ပြန်လည်စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြားနာပွဲကိုတက်ရောက်ရဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ စစ်ကောင်စီတို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုး စားခဲ့ ကြပေမယ့် စစ်ကောင်စီဘက်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင်၊ ရှေ့နေချုပ် ဒေါ်သီတာဦးတို့ ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရနေပါတယ်။
Labels: 2022, Ambia Perveen, ICJ, mm, NUG, OIC, Stefan Talmon, Video, ဂမ်ဘီယာ, ရှေ့နေ Christopher Staker, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြ ဌာေန ၿပန္နိုင္ေရး အလားအလာ
02 ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ 2022
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကေန ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာျပည္ ျပန္ႏုိင္ေရး ေဝဝါးေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ့ ရခုိင္ရုိ ဟင္ဂ်ာသမဂၢ(ARU) ကေန၊ OIC ႏုိင္ငံတကာအစၥလမၼစ္အဖြဲ့ အပါအဝင္၊ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရေတြနဲ့ အဖဲြ့စည္း အသီးသီးကုိ ေပးပုိ့တဲ့အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡေတြမွာ ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကုိ ထုိးႏွက္ဖုိ့အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ခုတုံးလုပ္ေရးသား ေျပာဆုိတာမ်ိဳး ေတြ ကုိလည္း ရပ္တန့္ဖုိ့ေဖၚျပထားပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ ကုိေဇာ္မုိးေက်ာ္ ကတင္ျပေပးပါမယ္။
Labels: 2022, ARU, ICJ, mm, NLD, OIC, USDP, Wakauddin, ရိုဟင္ဂ်ာ, သတင္း, ေနရပ္ၾၿပန္နိုင္ေရး
Joint statement calls for improving system of providing protection at refugee camps in Bangladesh
Dozens of Rohingya rights organizations on Tuesday denounced the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), an insurgent group recently involved in killing Rohingya at refugee camps in southeastern Bangladesh.
“The Rohingya community does not accept ARSA asagroup that represents the ideals and interests of them in or outside of Burma (Myanmar). Thus, the group must not claim it represents the interests of the Rohingya nation,” saidajoint statement signed by 22 Rohingya rights organizations, including the Arakan Rohingya National Organization (ARNO), the European Rohingya Council (ERC) and the Free Rohingya Coalition (FRC).
Labels: 2021, ARNO, ARSA, en, ERC, FRC, News, OIC, PR
Rohingya Crisis And OIC: Assessing The Role – Analysis
The Organization of Islamic Cooperation (OIC), after the United Nations (UN) is the second leading international governmental organization, with the membership of 57 states from four continents.  It represents the Islamic world and strives for protecting its interests. Bangladesh,amember of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), has conceded much of the socio-economic, political and security cost of providing asylum to approximately 1.2 million Rohingya refugees. The institution has so far played an important role in the Rohingya crisis through fundraising and legal support.
Labels: 2021, Analysis, en, OIC, Rohingya Crisis, UN
The contact group of the Organization of Islamic Cooperation on the Rohingya is led by Saudi Arabia. (Twitter/@OIC_OCI)
Delegates discussed the humanitarian situation due to the COVID-19 pandemic
They also discussed political developments in Myanmar
LONDON: Saudi Arabia’s permanent representative to the UN, Abdallah Al-Mouallimi, and the UN’s special envoy for Myanmar, Christine Schraner Burgener, chairedavirtual meeting about the Rohingya crisis on Tuesday.
Representatives of the Organization of Islamic Cooperation’s Contact Group on the Rohingya Muslim Minority were briefed on the latest developments in the humanitarian situation, and discussed how best it might be addressed, taking into account the effects of the coronavirus pandemic.
The delegates also talked about the latest political developments in Myanmar.
Labels: 2021, en, News, OIC, Rohingya Crisis
The latest Islamic Philanthropy report of the UNHCR has shown that Islamic Zakat donations in 2020 sawabig increase compared to previous years, amounting to $61.5 million, reaching more than two million displaced people across the world.
Compared to the period of 2016-2018, when Islamic donations had reached more than 34,000 people, last year, both Zakat and Sadaqah, along with Sadaqah Jariyah, which are other forms of religious donations, helped nearly 2.1 million people in total.
Labels: 2021, Article, Donations, en, IDPs, Islamic Zakat, OIC, Refugees, Rohingya, UNHCR
File photo of Bangladesh Foreign Minister AK Abdul Momen (Picture Courtesy: Twitter @AKAbdulMomen)
Bangladesh has written to Myanmar over the issue of repatriation of Rohingya Muslims. The announcement by Bangladesh's Foreign Minister Dr AK Abdul Momen comes days after the UNGA passedaresolution in this regard.
While addressingapress briefing on Sunday, AK Abdul Momen said he wrotealetter to his counterpart in Myanmar on the occasion of the New Year. "In the New Year,aletter has been sent to the State Council office in Myanmar," Momen said.
Labels: 2021, en, FM Dr AK Abdul Momen, Japan, Myanmar, News, OIC, Repatration, Rohingya
OIC အဖြဲ႕ တ႐ုတ္နဖားႀကိဳးထိုးခံေနရဟု ကန္မြတ္စလင္ မ်ား ေဝဖန္
ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၂၀
ဝီဂါမြတ္စလင္ေတြကို တ႐ုတ္အစိုးရက ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းရာမွာ OIC အဖြဲ႕က ပူးေပါင္းကူညီေပးေနတယ္လို႔ အေ မရိ ကန္မွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အမ်ားစုရွိတဲ့ နိုင္ငံေပါင္း ၅၇ နိုင္ငံပါဝင္တဲ့ OIC အဖြဲ႕ဟာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွာ အစၥလာမ္ ဘာ သာ၀င္ေတြ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းခံရမႈေတြအတြက္ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္အစိုးရက နိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ဝီဂါမြတ္စလင္ေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္း မႈေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး OIC က လုံး၀ ေဝဖန္မႈ မျပဳပါဘူး။
Labels: 2020, mm, OIC, တရုတ္ယဝီ၈ြမြတ္ဆလင္, သတင္း, အေမရိကန္
ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရး ေထာက္ပံ့မႈဆက္ေပးရန္ OIC အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္းဆို
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ၏ ေနရပ္ျပန္ေရးအထေျမာက္ေရးအတြက္ အစၥလာမ္မစ္ပူး ေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအဖြဲ႕(OIC) နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ ရာႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈဆက္ေပး ရန္ ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။
(၄၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အစၥလာမ္မစ္ေကာင္စီ၏ နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးကို နိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ နိုင္ဂ်ာ နိုင္ငံ နီယာေမးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ OIC အျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယားနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးေဒါက္တာမိုဟာမက္ဂ်ာဗက္ပတ္ဝါရီကယင္းသို႔ ေတာင္းဆို ခဲ့ ေၾကာင္း Dhaka Tribune က ယမန္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
Labels: 2020, mm, OIC, ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္, ရိုဟင္ဂ်ာ, သတင္, ေတာင္းဆို, ေထာက္ပံ့ေၾကး
Ambassador Hussein Ibrahim Taha from Chad has also been elected as the new secretary general of the 57-member bloc
The meet of the foreign ministers of 57 member states of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) has concluded in Niamey, Niger, seeking fund for legal battle over the Rohingya genocide, urging Muslim solidarity to fight Islamophobia and terrorism, and retreating support to the principle of Arab initiative of two state solution over the Palestine cause.
Labels: 2020, CFM, en, Islamophobia, News, OIC, Rohingya issue